Nkwupụta Omume Kacha Mma maka Usoro Mbido | Martech Zone
Nkwupụta Omume Nkwupụta Anọ kachasị maka Mbido Tech
Thursday, January 6, 2011 Wednesday, October 29, 2014 Adam Obere
Na-etinye ọtụtụ n'ime na mpụga nkwurịta okwu kacha mma omume ga-enye ntọala siri ike maka uto n'ọdịnihu.
Ghọta uru Mmekọrịta Ọhaneze bara - Okwu onu na tweeting igbanye mmasi ma burukwa uzo di nkpa n’ikwusa ozioma ndi na - azu ahia. Mana mmemme PR ọdịnala nwere ohere ịnweta ndị nyocha na ndị editọ nwere ndị na-agụ akwụkwọ dị njikere ma na-eguzosi ike n'ihe. Mgbe onye editọ na-edegharị ma ọ bụ na-ede otu isiokwu na ụlọ ọrụ gị, enwere ike ịnwe puku kwuru iri puku ga-ele ya. Ndị nyocha ụlọ ọrụ na ndị editọ nwekwara aha ọma nke ịbụ ndị ọkachamara ebumnuche. Inwe nkwado nke onye ọzọ nke ihe ngwọta gị na-ebu ibu karịa nkwado onwe gị. Soro ndụmọdụ gbasara mgbasa ozi nwere ahụmịhe na mpaghara ngwaahịa gị. Leverage ahụmịhe ha ma webata gị na ndị ọkachamara na-ekpuchi ngwaahịa yiri nke gị. Na-emetụta ndị a na mmelite na traction ahịa, teknụzụ ọhụụ na izi ozi metụtara usoro ụlọ ọrụ. Gbalịsie ike ka gị na ndị nta akụkọ nwee mmekọrịta dị ogologo oge ma ghọta ihe ha chọrọ iji mepụta ọdịnaya mbipụta.
Nwaleenụ gị ụlọọrụ ozi megide mpụga echiche na nnyocha - Emela kooụọ koolaid ma jiri ìsì nara echiche nke njikwa gị banyere ụwa. Anabatakwa esịtidem ihapu otutu okwu mee na-ekwe nkwa gị ngwaahịa na- "mbụ, pụrụ iche, kasị mma, na ndị ahịa na-kwụ n'ahịrị ịzụta" yiri agaghị dakọtara eziokwu na a ga-anwale. Agbanyeghi na ezigbo nchekwube bu ihe ahia niile, echefula ihe ozo n'eme n'ahịa. Na-eme ihe n'eziokwu. Ọ bụrụ na ị bụghị nke mbụ na nke kachasị mma - emela nke ahụ n’ime ọkwa ọla edo gị. (Nakwa okwu ịdọ aka na ntị: Kpachara anya ka ị ghara iji ọtụtụ okwu okwu na okwu ure.) Limmachibido ndị isi - n'ime na mpụga. Bulletproof gị ozi na ụlọ ọrụ na-enyocha na ndị ọkachamara maara gị asọmpi na ahịa ị na-egwu. Onye ọ bụla ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere osompi nke ụfọdụ ụdị- a ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ onye ndú na a Atiya nke otu. Njikwa ihe ịma aka iji mepụta eziokwu, nyocha na amụma iji kwado ike ọrụ ụzọ ahịa ngwaahịa. Ihe mgbaru ọsọ ọ bụla bụ ka ụlọ ọrụ nwee ihe ịga nke ọma.
Gbaa nkwukọrịta okwu n'etiti ndị ọrụ aka na azụmaahịa na nzukọ gị - Akụrụngwa dị na mbido agbatị mana zere ọnwụnwa iji kewapụ ndị ọrụ mmepe ngwaahịa gị na ndị mmadụ (nke a na-ere ahịa na ahịa) ndị na-agwa ndị ahịa gị n'ọdịnihu. Ndị na-ahụ maka teknụzụ na-abanye na teknụzụ "dị jụụ" oge ụfọdụ na-enweghị ikwenye na gizmo kachasị ọhụrụ bụ ihe mmadụ ga-achọ ịkwụ ụgwọ. Ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ bụ ndị na-emepụta ngwaahịa na agụụ na-enweghị ilekwasị anya n'ihe ahịa na ohere ga-ewepụta ngwaahịa nke na-agaghị ebupụta ụlọ ọrụ ahụ dị ka atụ anya ya. Gbaa nzaghachi site na ire ahia na ahia nye ndi otu mmepe ma nyochaa usoro ulo oru iji hazie uzo ahia ahia na ihe ndi choro n ’odinihu.
Kwadebe ndị ọrụ iji ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji kwurịta okwu nke ọma na oge elektrọnik - Nkwurịta okwu dị irè chọrọ ihe karịrị ekwentị mkpanaaka na akaụntụ email. Ndị ụlọ ọrụ ga-esetịpụ ụkpụrụ na ụkpụrụ maka nzukọ elektrọnik, izi ozi ozugbo na usoro ọgbakọ. Kwadebe ndị ọrụ nwere sọftụwia na ngwaike achọrọ maka nkwukọrịta na-enweghị ntụpọ na-eme ka ndị ọrụ kwado onwe ha ma rụpụta ọrụ. Ojiji nke nghazi ngwanrọ kọmputa (nke zuru ezu na ozi nbanye) kwesịrị ịdịịrị ndị niile na-ahazi nzukọ. A ga-amata usoro ogbako na okwuntughe ha jikọtara ma nwee mpaghara mpaghara na mba ndị a na-etinye mgbe niile. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ dị mkpa ka ọ bụrụ ebe nchekwa dijitalụ ebe ndị ọrụ nwere ike biputere nkwukọrịta dị n'ime dịka akwụkwọ ndekọ aha ụlọ ọrụ gụnyere usoro nkwukọrịta nke atọ na ọnụ ọgụgụ sel. Tọọ ụkpụrụ na ntuziaka maka nkwukọrịta dị n'ime na nke mpụga. Chọrọ oku ekwentị ka eweghachite na ozi ịntanetị ka azaghachi dịka akụkụ nke iwu nwere ọrụ.
Gbakwunye usoro nkwurịta okwu ndị a kachasị mma na mmalite teknụzụ gị ga - enyere aka iji hụ na ị gara nke ọma ka ndị otu gị na - eto ma na - eche ihe ịma aka nke ịkwaga echiche na ngwaahịa ọhụrụ n’ahịa.
You Nwere Mgbasa Ozi Gị Ọhụrụ?
Akwa post, Joy! Daalụ nke ukwuu maka isonyere anyị. Fọdụ ndị mgbasa ozi ọhụụ na-eleghara ike nke mmekọrịta ọha na eze anya mana anyị ahụla ya na ndị ahịa anyị!